Jeneraal Cabdalla Cabdalla oo laga saarey liiska xubnaha NISA
Cabdulqaadir Maxamed Nur Jaamac [Bidix] iyo Cabdalla Cabdalla [Midig, oo xilalkii NISA laga wada qaadey
MUQDISHO, Soomaaliya - War qoraal ah oo kasoo baxay NISA ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba liiska xubnaha NISA laga saarey Gen. Cabdalla Cabdalla Maxamed, kaasoo soo noqday Taliye ku xigeenka koowaad ee Hay'addaan.
Sababta ayaa lagu shaaciyay inay salka ku hayso wareysi uu dhawaan siiyay Cabdalla VOA-da, oo eedeymo cul-culus ugu jeediyay hogaanka sare ee NISA, oo uu sheegay inaysan u shaqeynin si waafaqsan nimaadka dowladnimo.
Marka laga soo tago qaladaad uu sheegay inay ka jireen gudaha Hay'adda, ayuu carabka ku dhuftay hay'adda Nabad Sugida Soomaaliya ay noqotay mid lagu caburiyo shaqsiyaadka dhaliila madaxa sare ee Dowladda Federaalka, oo lagu weeraro.
Qoraalka NISA kasoo baxay ayaa lagu cadeeyay in go'aanka Cabadalla Cabdalla looga saarey Hay'adda ay qaateen Guddi la sheegay in la sameeyay, kuwaasoo baaris ku sameeyay, sida hadalka loo dhigay, qaladaadkii uu wareysiga ku galay.
Si gaar ah waxaa farta lagu fiiqay in arrimaha xasaasiga ah ee uu banaanka soo dhigay Cabadalla Cabadalla uu ku lumiyay xubinnimadiisa Hay'adda, taasoo la sheegay inay ka hor-imaaneyso hanaanka shaqo ee hay'adda NISA iyo danaha qaran.
Arrimaha xasaasiga ah ee uu daboolka ka qaaday Cabdalla ayaa waxaa qayb ka ah in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku dhex-leeyihiin gudaha Hay'addaan xubno, kuwaasoo si dhow ula shaqeeya, una gudbiyay xogta dowladda.
Cabadalla oo jagadda Taliye ku xigeenka koowaad ee NISA hayey Lixdii sano ee lasoo dhaafay, ayaa waxaa xilka ka qaaday todobaadyo kahor Madaxwayne Farmaajo, kahor inta uusan shaqo joojin ku sameynin Taliyaha NISA.
Waxaa lagu bedelay Cabdalla Fahad Yaasiin, oo horey u ahaa Agaasiimaha Madaxtooyadda [Villa Somalia], kasoo kamid ah shaqsiyaadka saameynta ku dhex-leh dowladda Federaalka, sidoo kalena xiriir dhaw kala dhaxeeya dowladda Qadar.
Madaxa cusub ee NISA oo xilal kala duwan soo qabtay ayaa xiriir dhaw la leh...
CC Shakuur: Farmaajo iyo Fahad Yaasiin waxay isku dayeen inay i dilaan
Soomaliya 24.12.2017. 16:09
Sarkaal ciidan oo toogasho lagu dilay Muqdisho
Soomaliya 29.07.2018. 10:46
Isbedello waaweyn oo ku socda NISA [Yaa xilka laga qaadey?]
Soomaliya 29.07.2018. 00:39
Villa Somalia oo Qadar u ogolaatey dhoofsashada Duur-joogta [War Saxaafadeed]
Soomaliya 06.10.2018. 17:30
Taliyeyaal ciidan oo xilka laga qaaday kadib qaraxyo ka dhacay Muqdisho
Soomaliya 12.11.2018. 10:28
Taliye ku xigeenkii NISA oo xog badan kashifay [Dhageyso]
Soomaliya 29.08.2018. 17:44
Guddi Is-casilaad u gudbiyey Madaxweyne Siciid Cabdulahi Dani 26.06.2019. 01:05
Xiliga la dhageysanayo kiiska badda ee Soomaaliya-Kenya oo la mudeeyay 25.06.2019. 22:51
James Swan oo shaaciyey qorshihiisa ku wajahan hogaanka Soomaaliya 25.06.2019. 21:54
Norway oo sare u qaadeysa wadashaqeynta Puntland 25.06.2019. 18:38
Agaasimaha Guud ee Wasaarada Bartoolka oo shaqada laga joojiyey 25.06.2019. 18:10
Puntland oo daah-furtay mashaariicda maalgelinta u adkaysiga Abaaraha 25.06.2019. 17:28